प्रचण्ड-माधवको भेटले एमाले एकता भाडिएको त हैन?कति असर पर्यो?
काठमाडौं । शुक्रवार सात घण्टामा वार्ता गरेका एमाले कार्यदलका सदस्यहरुले साँझ मुख हसिलो बनाउँदै भनेका थिए– एमाले एकता हुने भयो । आज सबै कुरा मिल्यो । भोली खुशीको खबर दिन्छौँ । उनीहरुले भनेको भोली अर्थात आज शनिवार पनि एकताको फाइनल हुन सकेन । अर्थात हिजो एक भएको भनिएको एमालेको एकता आज फेरी भाँडिएको छ ।
शुक्रबार नै कार्यदलका सदस्यहरुले सहमति जुटिसकेको र केही भाषागत विषय मात्र मिलाउनुपर्ने भएकाले शनिबार बैठक बसेर सहमतिलाई सार्वजनिक गरिने बताएका थिए। तर, शनिबार दिउँसो सिंहदरबारमा कार्यदलका सदस्यहरु आइपुग्दा माहोल अर्कै बनिसकेको थियो। त्यसको कारण थियो, केहीबेर पहिले कोटेश्वरमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको भेटघाट।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेताहरुले प्रचण्ड–नेपाल भेटप्रति आपत्ति जनाएपछि औपचारिक बैठक नै बस्न सकेन। ‘हामी पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि भनेर छलफलमा बस्ने उहाँ (नेपाल) विपक्षीसँग भेटघाटमा रहने ? यो एकता नचाहेको कुरा भयो’, ओली पक्षका सदस्यले नेपाल पक्षका सदस्यहरुलाई भने।
त्यसपछि सिंहदरबारबाट निस्केर वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेताहरु सिधै नेपालनिवास कोटेश्वर पुगे। त्यहाँ उनीहरू नेता नेपालसँग रिसाए। वार्ता भाँड्न खोजेको आरोप लाग्ने भन्दै प्रचण्डसँगको भेटबारे स्पष्ट पार्न दबाब दिएर सिंहदरबार फर्किए। उनीहरूले सहमतिको मस्यौदाका विषयमा पनि नेपालसँग छलफल गरे। नेपालले ‘सकारात्मक रहेको’ जवाफ दिए।
आफूसँगको भेटपछि बैठकका लागि कार्यदलका सदस्य सिंहदरबार पुग्दा नपुग्दै प्रचण्डसँगको भेटबारे नेता नेपालको स्पष्टीकरण आयो। सचिवालयमार्फत् आएको स्पष्टीकरणमा प्रचण्डले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको र त्यसबाहेक अन्य कुरा नभएको भनियो।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विगत केही दिन यता स्वास्थ्यमा समस्या (जनै खटिरा) आई चिकित्सकको सल्लाह अनुसार घरमै आराम गरिरहनुभएको छ’, नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले लेखेका छन्, ‘आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कोटेश्वर निवासमा पुगी उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुका साथै स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ। उहाँको स्वास्थ्य समस्याका कारण आज संक्षिप्त भेट भएको र अन्य विषयमा कुरा नभएको स्पष्ट पार्दछु।’
नेपाललाई भेटेपछि दाहाल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए। त्यसले पनि ओली पक्षका नेताहरूमा संशय थपिएको थियो। विपक्षी गठबन्धन फेरि सक्रिय भएको उनीहरूले बुझे। यद्यपि, कार्यदलको औपचारिक बैठक बस्यो। नमिलेका केही विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास गर्‍यो। शुक्रबार भनिएजस्तो बैठक अन्तिम भने भएन।
कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण विष्टले प्रचण्ड–नेपालको भेटले कार्यदलमा कुनै असर नपारेको दाबी गरे। उनले बैठक सकारात्मक भएको र समग्रतामै समाधान खोज्ने विन्दुमा आइपुगेको बताए। र, भोलि आइतबार सहमतिलाई अन्तिम रुप दिने विष्टले बताए। उनको दाबी छ– भोलि नै एमाले एकताको सुखद् खबर आउनेछ।
यस्तै नेता सुवास नेम्वाङले पनि भोली ८ बजे देशबासीलाई नै खुशीको समाचार दिने बताए । उनले पत्रकारहरुसँग भने, हामीलाई बधाई दिए हुन्छ। धन्यवाद दिए हुन्छ। भोलि बिहान ८ बजे तपाइँहरूले सुखद् समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ ।